सिन्धुली समन्वय समितिको अध्यक्षमा एमाले विजयी- स्थानीय निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
श्रावण २५, २०७४ राजकुमार कार्की
सिन्धुली — सिन्धुली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा एमालेका शंकरराज तिवारी वर्मा विजयी भएका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र गठबन्धनका तर्फबाट उमेद्वार बनेका वर्माले बुधबार भएको निर्वाचनमा १३ मत ल्याएर विजयी बनेका हुन् ।
प्रकाशित : श्रावण २५, २०७४ १६:५४
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यले दिने उपचार खर्च नलिने
डिस्चार्ज भए भट्टराई
काठमाडौं — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । साउन २० गते प्रोस्टेटको शल्यक्रियापश्चात चिकित्सकको निगरानीमै नागरिक सामुदायिक अस्पताल, भक्तपुरमा रहेका संयोजक भट्टराई स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
उनलाई अझै दुई हप्ता घरमै आराम गर्न चिकित्सकको सल्लाह छ । उनको शल्यक्रिया डा. राकेशकुमार बर्माको टोलीले टीयुआरपी प्रविधिबाट गरेको थियो ।
अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने क्रममा अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सबै विशिष्ट व्यक्तिहरुले सम्भव भएसम्मको उपचार स्वदेशमा गर्नुपर्ने बताए । उनले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र टोलीलाई विशेष धन्यवाद दिए । शल्यक्रिया र उपचारका क्रममा ६५ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको र औषधीमा २० हजार खर्च भएको उल्लेख गर्दै सबै खर्च आफैंले व्यहोर्ने र राज्यबाट कुनै आर्थिक सहयोग नलिने पनि बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा डा. राकेश बर्माले विशिष्ट व्यक्तिहरु सामान्य उपचारका लागि समेत विदेश गइरहेको सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मेजर शल्यक्रिया नेपालमै गराउँदा आफूलाई खुशी लागेको र हौसला मिलेको बताए ।